”Raggii 2016-kii wax is daba mariyey midkoodna ma guulaysan!” – Mac’hadka Heritage oo ku baaqay in la bedelo Guddiga Doorashooyinka oo ay ku tilmaameen mid ”ma dhalays ah” (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Raggii 2016-kii wax is daba mariyey midkoodna ma guulaysan!” – Mac’hadka Heritage...
”Raggii 2016-kii wax is daba mariyey midkoodna ma guulaysan!” – Mac’hadka Heritage oo ku baaqay in la bedelo Guddiga Doorashooyinka oo ay ku tilmaameen mid ”ma dhalays ah” (Dhegeyso)
(Garoowe) 14 Nof 2020 – Hay’adda Cilmibaarista Heritage ayaa warbixin ay soo saartay ku dhaliishay qaabka ay ku socdaaan arrimaha doorashooyinka Somalia oo Madaxtooyada lagu eedeeyey inay gacan bidxaynayso.
C/rashiid Khaliif Xaashi, madaxa Heritage oo hada ku sugan Garoowe isla markaana VOA waraysi siiyey ayaa ku baaqay in Guddiyada Doorashadu aanay noqonin kuwo ”gacan ku rimis ah” oo ka kooban ciidamadoodii iyo shaqaalohoodii.
Xaashi ayaa madaxda sare ee DF xusuusiyey in ay cashar ku qaataan wixii dhacay 2016-kii isagoo sheegay in sidan oo kale wax la isu dhaaf dhaafiyey balse aanay guulaysanin dadkii sidaa yeelay.
”Wixii dadka qaraaba gedinayey maanta mid xil hayaa ma jiro, marka boobku kama dhigna in lagu bullaalayo. Abtiyaal, adeerro iyo qofkii ii shaqeeya ayaan keensanayaa socon mayso.” ayuu yiri Xaashi oo caalamka usoo jeediyey in aan la maalgelin doorasho aan saaxi ahayn, sida uu yiri.
Mar la waydiiyey inuu caddayn u hayo eeddiisa wuxuu ku dooday in dad la iska soo qortay min heer federaal ilaa heer gobol oo uu qof kasta iska soo qortay qofkii uu isagu jeclaa, balse ay Somalia leedahay dad loo qaateen ah, isagoo ku baaqay in la diido.
Wuxuu kale oo aad farta ugu fiiqay dhibka ay leedahay in doorashooyinka la lacageeyo, isagoo sheegay inay dacwad u gudbinayaan Golaha Amaanka iyo Beesha Caalamka.
Previous articleXOG: Itoobiya oo kumannaan askari kala baxaysa Somalia & saraakiil Tigree ah oo la xirey
Next articleRuushka oo soo caga dhigtay Bariga Afrika (Dal siiyey saldhig la mid ah kii uu Somalia ku lahaa 70-meeyadii)